သုတဆောင်းပါးများဖတ်ရင်း စာဖတ်စွမ်းရည်မြှင့်ကြရအောင် (၈) - Myanmar Network
Posted by Language Republic on August 22, 2014 at 12:04 in အင်္ဂလိပ်စာ သိကောင်းစရာ အဖြာဖြာ
ယနေ့ စာဖတ်စွမ်းရည်မြှင့်ကြရအောင် အစီအစဉ်မှာ Webmd.com မှ "How Healthy are the New Soft Drinks" လို့ခေါ်တဲ့ ကျန်းမာရေးနှင့် မညီညွတ်သော အချိုရည်များ အကြောင်းကို ရှင်းပြထားတဲ့ ဆောင်းပါးကို ဖတ်ရှုပြီး မှတ်သားဖွယ် ဝေါဟာရအချို့ကိုလေ့လာကြပါမယ်။
ဘာသာစကားအနေနှင့်သာမက ဗဟုသုတပါရစေမဲ့ သင်ခန်းစာဖြစ်ပါတယ်။ ဖတ်လို့အဆင်ပြေစေဖို့ အင်္ဂလိပ်ဘာသာတစ်ပိုဒ် မြန်မာဘာသာတစ်ပိုဒ် ရေးပြထားပါတယ်။
How Healthy Are the New Soft Drinks? (အချိုရည်အသစ်တွေသည် ကျန်းမာရေးနှင့် မည်မျှညီညွတ်သနည်း)
The truth is that artificially sweetened soft drinks – even those fortified with vitamins and minerals -- are anything but natural and healthy, says Marion Nestle, New York University nutrition professor and author of What to Eat. "It is ridiculous to market soft drinks as healthy, but in today’s marketplace consumers are demanding more healthy looking food, and beverages and soft drink manufacturers need to boost sales," she says. Most consumers do not need the extra vitamins found in fortified soft drinks, she adds.
သဘာဝအရ ချိုနေတာမဟုတ်တဲ့ အချိုရည်တွေဟာ ဗီတာမင်နဲ့ သတ္တုဓာတ်တွေ ထပ်ဖြည့်ထားတာတောင်မှ တကယ့် သဘာဝအချိုရည် လုံးဝ မဟုတ်သလို ကျန်းမားရေးနဲ့လည်း လုံးဝမညီညွတ်ပါဘူးလို့ "What to Eat " စာအုပ်ရေးသားသူ New York တက္ကသိုလ်ရဲ့ အစာအာဟာရပါမောက္ခ Marion Nestle က ပြောပါတယ်။ " ကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်တယ်ဆိုပြီး အချိုရည်တွေကို ရောင်းနေတာ အဓိပ္ပါယ်မရှိပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ဒီနေ့ ဈေးကွက်ထဲမှာ စားသုံးသူတွေက ကျန်းမာရေးနှင့် ညီညွတ်ပုံရတဲ့ အစားအသောက်တွေ၊ အဖျော်ယမကာတွေ၊ အချိုရည်တွေကို ပိုပြီးတောင်းဆိုနေကြတဲ့အပြင် အဖျော်ယမကာနှင့် အချို ရည်ထုတ်လုပ်သူတွေကလည်း ရောင်းအားကို မြှင့်တင်ဖို့လိုနေပါတယ်" လို့ သူမကပြောပါတယ်။ အချိုရည်တွေမှာ ဖြည့်ထားတဲ့ ဗီတာမင်တွေကို စားသုံးသူအများစုအနေနဲ့ မလိုအပ်ပါဘူးလို့ သူကထပ်ပြောပါတယ်။
"ကျွန်မတို့ဟာ ဗီတာမင်ချို့တဲ့နေတာ မဟုတ်တဲ့အပြင် ဒီအဖျော်ယမကာတွေကလည်း အ၀လွန်ခြင်း၊ နှလုံးရောဂါ နှင့် ကင်ဆာ အစရှိတဲ့ ကျွန်မတို့နိုင်ငံရဲ့ တကယ့်ကျန်းမာရေး ပြဿနာတွေကို ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းတာ မဟုတ်ပါဘူး" လို့ Nestle က ပြောပါတယ်။
ဒါကို Vermont တက္ကသိုလ်က သုတေသနပညာရှင် Rachel Johnson, PhD, RD, က ထောက်ခံပါတယ်။
"အချိုရည်ထဲကို ဗီတာမင်ဆေးပြား မထည့်ရုံတမယ် လွန်လွန်ကဲကဲ အားဖြည့်ထားတဲ့ ထုတ်ကုန်တွေ ရှိနေတာကို ကျွန်မအနေနဲ့ စိတ်ပူမိပါတယ်။ ဒီအချိုရည်တွေထဲကို ထည့်တဲ့ အာဟာရဓါတ်တွေဟာ calcium, potassium, folate (သို့) Vitamin D ကဲ့သို့ လိုအပ်တဲ့ အာဟာရဓါတ်တွေ မဟုတ်ပါဘူး" လို့ သူမကပြောပါတယ်။
Johnson advises consumers to choose beverages that not only quench thirst but also deliver needed nutrients, such as 100% fruit juice and skim or low-fat milk. "These beverages will help you meet your nutritional needs and satisfy the recommendations of the [U.S. government's] 2005 Dietary Guidelines," she says.
စားသုံးသူတွေကို အဖျော်ယမကာရွေးတဲ့အခါ ရေငတ်ပြေစေရုံမကပဲ လိုအပ်တဲ့အဟာရဓါတ်တွေကို ပေးနိုင်တဲ့ အချိုရည်တွေကို ရွေးဖို့ Johnson က အကြံပြုပါတယ်။ အဲဒီ အချိုရည်တွေကတော့ ရာခိုင်နှုန်းပြည့် သစ်သီးဖျော်ရည် (100% fruit juice) နှင့် မလိုင်ထုတ်ပြီး (သို့) အဆီ ဓါတ်နည်းသော နို့တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအဖျော်ရည်ယမကာတွေဟာ သင်လိုအပ်နေတဲ့ အာဟာရဓါတ်တွေကို ဖြည့်ဆည်းပေးပြီး (U.S အစိုးရ၏) "2005 Dietary Guidelines" ရဲ့ အကြံပြုချက်တွေနဲ့လည်း ကိုက်ညီပါတယ်လို့ သူမကပြောပါတယ်။
artificial (adj) [artificially (adv)] - သဘာဝကို တုပ ပြုလုပ်ထားသော။ အတု။
fortify (v) - အားဖြည့်သည်။ အာနိသင် ဖြည့်သည်။
ridiculous (adj) - မဖြစ်နိုင်သော။ အဓိပ္ပါယ်မရှိသော။
demand (v) - တောင်းဆိုသည်။ လိုအပ်သည်။ ဝယ်လိုသည်။
deficient (adj) - မပြည့်ဝသော။ လိုနေသော။ ချို့တဲ့သော။
obesity (n) - အဝလွန်ခြင်း။
virtually (adv) - ... လုနီးပါး။ ... သလောက်။
shortfall nutrients - လိုအပ်သော အာဟာရဓာတ်များ။
quench (v) - ရေငတ်ပြေစေသည်။
Text source: http://www.webmd.com/diet/features/can-soft-drinks-be-healthy
ဗြိတိသျှကောင်စီ ရန်ကုန် စာကြည့်တိုက်တွင် စက်တင်ဘာလ (၁) ရက် တနင်္လာနေ့ ညနေ ၅ နာရီတွင် “Evolving the Spirit - 10 Steps to Change the World” ခေါင်းစဉ်ဖြင့် Anthony Russel မှဟောပြောပါမည်။
Anthony Russel သည် “ Chandos Foundation” ၏ တည်ထောင်သူဖြစ်ပြီး အကြမ်းဖက်မှု့ကို ဆန့်ကျင်သော သမိုင်းပညာရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်ပါသည်။ "Evolving the Spirit - From Democracy to Peace" စာအုပ်အား ရေးသားထားသူ ဖြစ်သည့် Anthony Russel သည် ဤဟောပြောပွဲတွင် စစ်မှန်သော အသိဥာဏ်နှင့် ရင့်ကျက်မှုရရှိရန်လိုအပ်သည့် အချက်များကိုဆွေးနွေးသွားပါမည်။
နေ့ရက် - ၂၀၁၄ စက်တင်ဘာလ (၁) ရက်
အချိန် - ညနေ ၅ နာရီ
နေရာ - ဗြိတိသျှကောင်စီ ရန်ကုန် စာကြည့်တိုက် (၇၈ ကမ်းနားလမ်း ရန်ကုန်မြို့)
အွန်လိုင်းမှ စာရင်းသွင်းရန် -> http://tinyurl.com/libtalk-sep-14
သူ၏ အကြောင်း အပြည့်အစုံကို ဤဝက်ဗ်ဆိုက် (http://www.thechandos.com/thefounder.htm) တွင် သွားရောက်ဖတ်ရှုနိုင်ပါသည်။
ဟောပြောပွဲကို အသင်းဝင်မဟုတ်သူများလည်း တက်ရောက်နိုင်ပြီး၊ မှတ်ပုံတင်(သို့မဟုတ်) အခြားသက်သေခံကဒ်တစ်ခုခု ယူဆောင်လာရန် လိုအပ်ပါသည်။